Stock news | FeedShuttle
Feed created by eshab
बजेटबाट खुसी भएनन् लगानीकर्ता, भन्छन्- हामी आशावादी थियौं, तर…
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट सार्वजनिक गर्दै पुँजीबजारको दायरा विस्तार गरिने बताएका छन् । उनले बजारको दायरा फराकिलो बनाई ऋणपत्रको कारोबार दोश्रो बजारमा शुरु गरिने बताएका छन् । साथै, उनले नेप्सेको दोश्रो बजारको कारोबारलाई पूर्ण रुपमा अनलाइन गरिने बताएका छन् । त्यस्तै, पुँजी बजारमा संस्थागत लगानी बढाउन आगामी […]
Source Feed: सेयर
Categories: फोकस, विविध, सेयर
काठमाडाैं । सेयर बजारको लागी आगामी आर्थिक वर्षको २०७७/७८ को बजेट ‘कागलाई बेल पाक्यो, हर्ष न बिस्मात’ भने झै भएको नेपाल पुँजीबजार लगानीकर्ता संघकी अध्यक्ष राधा पाेखरेलले बताईन् । आगामी आर्थिक वर्षदेखि डिलर शिपको व्यवस्था गरेको भन्दा बाहेक एउटा पनि पुँजी बजारको विकास र विस्तारको लागी कार्यक्रम यो बजेटमा नपरेको उनको तर्क छ । हालै प्रस्तुत भएकाे आगामी आर्थिक […]
Categories: भरखरै, वित्त, विविध, सेयर
पूँजी बजार सुधारका लागि संस्थागत पुनर्सरचना गरिने, आगामी बर्ष स्टक डिलर कम्पनी संचालनमा ल्याईने
काठमाडौं । सरकारले पूँजी बजार सुधारका लागि सम्बद्ध निकायहरुको पुनर्सरचना गर्ने भएको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आगामी आर्थिक बर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै धितोपत्र बोर्ड, नेपाल स्टक एक्स्चेञ्ज, सिडिएससी लगायतका संस्थाहरुलाई पुर्नसंरचना गर्ने बताएका हुन् । यसैगरी बजारलाई दिगो रुपमा विकास गर्न संस्थागत लगानीकर्तालाई सहज रुपमा प्रवेशको वातावरण बनाईने भएको छ । आगामी बर्षदेखि स्टक डिलर कम्पनी र बस्तु विनिमय बजारलाई संचालनमा ल्याउने बताएका हुन् । The post पूँजी बजार सुधारका लागि संस्थागत...
Source Feed: Share – Bizkhabar Online
Categories: market, share, special
अब दोश्रो बजारमा ऋणपत्रको कारोबार हुने, लगानी बढाउन स्टक डिलर सञ्चालनमा ल्याउने
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले पुँजीबजारको दायरा विस्तार गरी ऋणपत्रको दोश्रो बजार कारोबार शुरु गरिने बताएका छन् । संघीय सदनको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट प्रस्तुत गर्दै उनले सो बताएका हुन् । उनले नेप्सेको दोश्रो बजार कारोबारलाई पूर्ण रुपमा अनलाइन गरिने बताएका छन् । साथै, पुँजी बजारमा संस्थागत लगानी बढाउन आगामी आर्थिक वर्ष स्टक […]
Categories: भरखरै, विविध, सेयर
दुई महिनापछि सार्वजनिक भयो सुनचाँदीको मूल्य, बुधबार सुन तोलाको ८६ हजार ८० रुपैयाँ
काठमाडौं । लकडाउनका कारण दुई महिनादेखि सार्वजनिक नगरिएको सुनचाँदीको भाउ बुधबारदेखि सार्वजनिक भएको छ। नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभूषण महासंघका महासचिव कृष्णलाल महर्जनले बुधबारदेखि नियमित सुनचाँदीको दरभाउ प्रकाशित हुने जानकारी दिए। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुनको मूल्य बढिरहँदा नेपाली बजारमा भने मूल्य सार्वजनिक नभएका कारण उपभोक्ता अन्योलमा परेको महर्जनको ठहर छ। पुरानै दरभाउ सामाजिक संजालमा देखिँदा उपभोक्तालाई समस्या परेकाले फेरि दैनिक रूपमा सुनचाँदीको दर प्रकाशन गर्न लागेको उनले विज्ञप्ति जारी...
Source Feed: Bizmandu RSS Feed
काठमाडौं । पछिल्लाे एक वर्षमा धितोपत्र बजार पुँजीकरण २४.७ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले २०७५ फागुन मसान्तको तुलनामा २०७६ फागुन मसान्तमा धितोपत्र बजार पुँजीकरणमा सो मात्राले वृद्धि भएको जनाएका हुन् । उनका अनुसार गत फागुन मसान्तसम्ममा धितोपत्र बजार पुँजीकरण १७ खर्ब ६० […]
Categories: भरखरै, सेयर
काठमाडौं । सरकारले लकडाउन (बन्दाबन्दी)को समयावधि बढाएसँगै नेपाल स्टक एक्स्चेन्ज (नेप्से) पनि आगामी २० गतेसम्म स्थगित गरिएको छ । नेप्सेले सोमबार एक विज्ञप्ती जारी गर्दै उक्त कु्राको जानकारी दिएको छ । नेप्सेको आज बसेको बैठकमा उक्त निर्णय भएको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ । नेप्सेले केही दिन अघि अनलाईन कारोबार खुल्ला गरेको थियो । तर उक्त अनलाईन कारोबारको दुबैदिन डबल सर्किट लागेपछि धितोपत्र बोर्डको निर्देशनमा कारोबार रोक्का गरिएको थियो । अब भने नेप्सेले लकडाउन अवधिबर कारोबार खुला नगर्ने निर्णय गरेको हो...
Categories: market, share, stock market
दुई दिन खुलेको सेयर बजार 'अनिश्चितकालीन' बन्द, 'कोरोना संक्रमणले त्राहित्राहि बनायो' भन्दै बन्द
काठमाडौं। लकडाउनपनि निरन्तर बन्द रहेको सेयर बजार दुई दिन खुलेपछि फेरि अनिश्चितकालका लागि बन्द गरिएको छ। धितोपत्र बोर्डले अर्को ब्यवस्था नहुन्जेलसम्मका लागि सेयर कारोबार बन्द गर्न निर्देशन दिएको छ। झन्डै डेढ महिना बन्द भएपछि सेयर बजार गत मंगलबार र बुधबार सञ्चालन भएको थियो। दुई नै दिन बजार ओरालो लागेको थियो। बोर्डका अध्यक्ष भीष्मराज ढुंगानाले कोरोनाको संक्रमण अझ बढेपछि कारोबार बन्द गर्ने निर्णय गर्नु परेको बताए। 'बीचमा नियन्त्रणमा आएकाले खोलिएको हो।...
काठमाडौं । लामो समयको लकडाउन पश्चात मंगलबार र बुधबार खुलेको नेप्से परिसुचक पुनः बन्द भएको छ । पछिल्लो समय फैलिदो कोरोना संक्रमणका कारण सरकारले लकडाउनलाई थप कडा बनाउने निर्णय गरेसँगै धितोपत्र बोर्डले पनि सेयर बजार बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो । आजैका मितिदेखि सेयर कारोबार बन्द गर्न नेपाल स्टक एक्स्चेञ्ज (नेप्से)लाई निर्देशन दिइएको बोर्डका अध्यक्ष भिष्म ढुंगानाले जनकारी दिए । ‘बोर्डले भर्खरै मात्र आजैका मितिदेखि कोरोबार बन्द गर्नु भनेर नेप्सेलाई निर्देशन दिएका छौं,’ उनले भने, ‘तर बजार कहिलेसम्म...
Categories: market, share, special, share market, share_nepse
खुलेको ३९ मिनेटमै सेयर कारोबार बन्द, २ प्रतिशतले घट्यो, ७४ कम्पनीका ३६ लाख रुपैयाँको किनबेच
काठमाडौं। खुलेको ३९ मिनेटमै सेयर बजार दुई प्रतिशतले घटेपछि बुधबारका लागि कारोबार बन्द गरिएको छ। सूचक १२०१.५७ अंकमा झरेको छ। सूचक २४.५८ अंकले घट्दा कारोबार रकम भने ३६ लाख १३ हजार रुपैयाँमै समेटिएको छ। सबै उपसूचकहरु ओरालो लागेको छ। बैकिङ समूह साढे २५ अंकले ओर्लिएको छ भने जीवन बीमा १३० अंकले तल आएको छ। जम्मा ७४ कम्पनीको सेयर कारोबार भएको छ। कुल २११ वटा कारोबारमा १० हजार ५२६ कित्ता सेयर...